विश्वको सबैभन्दा ठूलो आरएसएस बटन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन! | Martech Zone
विश्वको सबैभन्दा ठूलो आरएसएस बटन? मलाई त्यस्तो लाग्दैन!
बिहीबार, अक्टुबर 12, 2006 आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
मलाई समीक्षा गर्नुहोस् चाँडै सुरु हुँदैछ। तिनीहरूको साइटले संसारको सब भन्दा ठूलो आरएसएस बटन भएको दावी गर्दछ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मेरो ठूलो छ!
शीर्ष Re कारणहरू किन मँ हरेक पोष्टमा सूचि प्रयोग गर्दिन।
विन्डोज भिस्टा लाईसेन्स परिवर्तन गर्दछ
अक्टूबर २०, २०१ at २:12० अपराह्न
होइन, म अहिले ६,००० बाइ ६,००० मा छु! 🙂
तपाईंसँग सबैभन्दा ठूलो हुन सक्छ, तर मसँग सबैभन्दा धेरै छ: http://blog.olonoh.com/rssbuttons.html.
हैन, तिमीलाई त्यहाँ पनि पिटाइयो!
[गीकहरू सेक्सी छन्] टेक। समाचार
अक्टूबर २०, २०१ at २:13० अपराह्न
rofl, हास्यास्पद सामान, मलाई राम्रो हाँसो थियो।
तर के थाहा ? तिमीहरु हास्यास्पद छौ 🙂
म प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयास पनि गर्दिन!
ओह र btw, मलाई आशा छ कि यो पोष्ट कहिल्यै डिगको अगाडिको पृष्ठमा नआओस्, यसले तपाइँलाई तपाइँको ब्यान्डविथ सीमालाई कुनै पनि समयमा बस्ट बनाउँदछ 😉
अक्टूबर २०, २०१ at २:14० अपराह्न
यो धेरै ठूलो छ!
"सेनरोक्स द्वारा टिप्पणी अक्टोबर 12, 2006 @ 8:41 बजे
मलाई डग थाहा छैन। मलाई लाग्छ कि मेरो ले तपाईलाई लगभग 400 पिक्सेलले हराउँछ
मेरो खोजमा डिजाइनबट्स @ हाम्रो वेबसाइटको लागि "विशाल बटन" को लागी खोजी गर्दा मैले यो वेबसाइट भेटें र माथिको पोस्ट lol हुन पाएको छु! त्यो बटन देखेपछि म लगभग मेरो कुर्सीबाट खसेको थिएँ! lol